Qubanaha » Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah Xilka ula waregay.+Sawirro
Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah Xilka ula waregay.+Sawirro
Astaankii qaranka markii la tumay, waxaa loo keenay Xasan Shiikh Calankeena oo uu ku wareejiyay Madaxweynaha Cusub , aad bay u qurux badneyd markii labadooda oo wada haya ay halmar kor utaageen.
Iyagoo dhoolaca cadeynayaa , mar is gacan qaadaya , marna aad isugu soo dhowaanaya iyagoo kaftamaya, ayeey labadooduba salaan gacan taag ah wada salaameen dhaamaan dadkii oo iyaguna sacab ku biiriyay xaflada.
Waxay uwada tageen oo gacan qaadeen Madaxdii kale ee dowladda ee kulanka joogay, Gudoonka labada Aqal, xubno ka tirsan labada gole , saraakiil ciidan iyo mid madaxtooyo.
Intaasi kadib Madaxweynihii hore Xasan Shiikh Maxamuud ayaa madaxtooyada ka raacay , gaari cad oo ah nooca la yiri xabadu kama dusto, waxaana ilaa gaariga sii dhoweeyay madaxweynaha cusub Farmaajo.
Waaan kaga mahadcelinaya in aad akhriday qoraalkayga
W/D Jama Deperani